ကိုယ့်ကိုကိုယ်မညာတဲ့သူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » ကိုယ့်ကိုကိုယ်မညာတဲ့သူ
Posted by ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း on Jan 18, 2011 in Society & Lifestyle |4comments
ဆရာတော်ဦးဇောတိက ရေးတဲ့ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ချီးမွမ်းခြင်း ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထဲကလို ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ပြီး၊စဉ်းစားမိသွားတယ်။ဆရာတော်ရေးသားခဲ့သည့် အတိုင်းကျွန်တော်ကလည်း ငယ်စဉ်ထဲက သူများနဲ့ ငြင်းခုံရမယ်ဆိုရင် သူကြိုက်တဲ့ဘက်သူနေ၊ သူ မကြိုက်တဲ့ဘက်ငါနေဘဲ။ အဲဒီ…အကြောင်းအရာတစ်ခုကိ့ သူများကပြောရင် ကိုယ်လက်မခံတဲ့အကြောင်းအရာပါလာလို့ကတော့ အဲဒါကို အကြွေးမထားဘူး။အဲဒီနေရာမှာတင် အထောင်အထားတွေ အများကြီးနဲ့ထောက်ပြလိုက်တယ်။စာတွေဖတ်ပြီး သိသလောက်နဲ့ လိုက်အုပ်တော့တာပဲ။ ကြာတော့ဘာဖြစ်လာလဲ ..လူမုန်းများလာတယ်၊ဘာသာရေးနဲ့ပက်သက်ရင်ပိုပီးဆိုးပါတယ်။ ငါသူများအပြစ်တွေပဲရှာပြီးပြောရင်။သူများကလည်းငါအပြစ်ကိုပြန်ရှာမှာပဲ။နောက်တစ်ခုက ဝေဖန်တဲ့သူတိုင်းကိုလိုက်ရှင်းနေရင် မိမိရဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေပျက်ပါတယ်။ You don’t have to explain yourself. ကိုယ်တစ်ခုခုလုပ်တိုင်းလူတိုင်းကို လိုက်ပြီးရှင်းပြနေစရာမလိုပါဘူးတဲ့။ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာ ကောင်းတယ်လို့ထင်တာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး စဉ်းစားပြီးလုပ်ပါတဲ့။ ဘာကိုမှလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံပါနဲ့တဲ့။ဘာသာတရားနဲ့ပက်သက်ရင်ပိုပြီးတော့စဉ်းစားရပါမယ်။ မှန်ကိုဘာကြောင့်ကြည့်တာလဲ..ကိုယ့်မျက်နှာမှာ ကြည့်မကောင်းမြင်မကောင်းတာ ဘာများရှိလဲဆိုပြီးကြည့်တာပါ။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှန်ကြည့်ကြတယ်၊ မကြည့်ဖြစ်တဲ့သူရှိလား။မရှိပါဘူးတဲ့။မြင်မကောင်းတာကြည့်မကောင်းတာတွေကို လူကြားထဲသွားရင် သူများမြင်သွားမှာ ရှက်တာပေါ့တဲ့။ မျက်နှာကို မှန်မှာကြည့်ပြီးတော့ မြင်မကောင်းတာတွေကို၊မျက်နှာသစ်လိုက်သလို၊သန့်ရျင်းအောင်လုပ် သလိုကိုယ့်စိတ်ကိုလည်း ကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့ ဘာများလွဲမှားနေသလဲ ဆိုပြီး ပြင်ရတာ ကိုယ်အတွက်အင်မတန် အကျိုးများပါတယ်။ မှန်တိုင်းလည်းမပြောသင့်ဘူးတဲ့၊မှန်တိုင်းပြောရင်လည်းမုန်းတဲ့လူများမယ်တဲ့။ ဘယ်လိုဝေဖန်မလဲ၊ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝေဖန်မယ်…ကိုယ့်ကိုကိုယ်ညာရင် အကျိုးမရှိဘူးနော်၊ကိုယ့်ကိုကိုယ်ညာနေတဲ့သူဟာ တကယ်အဆင့်မြင့်တဲ့စိတ်ထား၊အဆင့်မြင့်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုမရနိုင်ပါဘူးတဲ့။ကိုယ်ကိုကိုယ်မညာတဲ့သူမှသာ ရိုးသားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မညာတော့ ဘူးဆိုရင် သူများကိုလည်းညာဖိုခက်သွားပြီ။ ရိုးသားမူဟာ ဘ၀ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားဖို့အရေးမှာ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ပါပဲတဲ့။ Of all the judgement that we pass in is at important as the one we pass on ourseleves,for that judgment touches the very center of our existance. ဝေဖန်တာတွေထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်တာလောက် အရေးကြီးတာမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဘာကြောင်လဲဆိုတော့ အဲဒီ ကိုယ့်ကိုယကို ဝေဖန်လိုက်တာ ကိုယ်ဘ၀ရဲ့ အချက်အချာဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲအထိ ရောက်သွားလို့ပါလဲတဲ့။…..
ဂေဇက်မှာကျနော့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးပိုစ့်လေးပါ။သူကြီးက အက်ဒိတ်လုပ်နေတယ်ဆို့လို့အဟောင်းလေးတွေပြန်ရှာကြည့်တာပါ…ထုံးစံအတိုင်းပဲ မရပါဘူး..အမှတ်စဉ်..(၅)..ဆိုရင် Not Found Page ပါပဲ…အဲဒါနဲ့ မေးလ်ထဲမှာ ရှိသေးလားလို့ပြန်ရှာရင်းဆွဲထုတ်လာခဲ့တာပါ…အမှန်ကတော့ ကျနော် ဂေဇက်မှာ မန်ဘာအနေနဲ့တစ်ကျော်ပါပြီ..ဒီပို့စ်က တစ်နှစ်ပြည့်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားလို့ပါ…ဂေဇက်မှာ ညီအကိုမောင်နှမများကို အစဉ်အမြဲသတိရနေမှာပါ။
ပိုစ့်တွေကိုပြန်ပြီး Edit လုပ်လို့ရပါသေးလားလို့စမ်းသပ်ရင်း…(ပိုစ့်ထဲကလိုပဲ တစ်နှစ်မှတစ်ခါ မှန်ကြည့်ဖြစ်နေပါသည်။)သူကြီးရေ ပွိုင့်တွေထပ်မပေးနဲ့တော့နော်..ပေးလဲ ရတာမှမဟုတ်တာ နော့်..
ဟုတ်ပါတယ် … အလွန်မှန်ပါတယ် …
ဒီစာဖတ်မိတော့မှာ မှန်ကြည့်ဖို့ သတိရသွားတယ် … မှန်မကြည့်ဖြစ်တာတောင် တော်တော်ကြာနေပြီပဲ …
ငယ်ငယ်ကကျူရှင်သင်ပေးနေတဲ့ဆရာပြောတဲ့စကားတခွန်းရှိတယ် လေါကမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်နိုင်ခြင်းကလေါကကိုအောင်နိုင်ခြင်းတဲ့ ကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြို့မှာတော့စေတနာကောင်းစည်းကမ်းကြီးတဲ့ ဆရာပါ စာသင်တဲ့နေရာမှာလဲအရမ်းတော် နံမည်ကဆရာ ဦီးသန့်ဇင် ပါ….
ရိုးသားမူဟာ ဘ၀ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားဖို့အရေးမှာ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ပါပဲတဲ့။
ဒါအမှန်ဆုံးပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က လူအချင်းချင်း ဆက်သွယ် ပေါင်းကူးခြင်းမှာလည်း ယုံကြည်မှုက အရမ်းလိုအပ်ပါတယ်။